भारतीय गाडीमा अडेस लाग्दै केपी ओलीका भावी परराष्ट्रमन्त्रीले गरे चुनावी सम्बोधन
२o७४ कार्तिक २५ शनिबार
काठमाडौं । चुनावी प्रचार प्रसारमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका वाम गठबन्धनका काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार डा. राजन भट्टराई र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार क्षेत्र नं. ४ ‘क’ का उम्मेदवार निर्मल कुइँकेलले भारतीय नं. प्लेटको गाडीसँगै उभिएर चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा चुनावी सम्बोधन गर्दै भारतको आलोचना गरिरहेका एमाले उम्मेदवार भट्टराईले भारतीय नं. प्लेटको गाडीमा टाँस्सिएर बोलिरहेको पत्तै पाएनन् ।
एमाले उम्मेदवार दुवैले एचआर १२ एए ८३०५ नं. को सेतो भारतीय कारसँगै उभिएर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । रोचक कुरा त के थियो भने राष्ट्रवादी कुरा गर्दै नाकाबन्दी सम्झिरहेका एमाले उम्मेदवार भट्टराईले भारतीय नं. प्लेटको गाडीको अघिल्तिर भारतको पनि आलोचना गरिरहेका थिए । यद्यपि यो सबै संयोगवश भएको थियो । उनीहरु जहाँ कार्यक्रम गरिरहेका थिए त्यहाँ पहिले नै उक्त कार रोकिराखिएको थियो । सर्वप्रथम उक्त कार्यक्रममा निर्मल कुइँकेलले सम्बोधन गर्दै भोट मागेका थिए, र पछि त्यही कार्यक्रममा हतारिँदै डा. राजन भट्टराई आइपुगेका थिए । भट्टराईलाई केही दिनअघि मात्रै केपी ओलीले काठमाडौंमै आयोजित एक चुनावी कार्यक्रममा अबका परराष्ट्रमन्त्री भनेर परिचित गराइसकेका छन् ।
वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि आगामी चुनावमा साझा उम्मेदवार बनेका डा. राजन भट्टराईले शनिबार आफूहरुलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरेका हुन् । आगामी निर्वाचन महत्वपूर्ण निर्वाचन र संविधानपछिको पहिलो निर्वाचन भएकाले संविधानको परिपालनासँगै देशविकासमा भूमिका खेल्न सक्ने गरी विवेकपूर्णमतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरे । विगतमा संविधानअनुसार निर्वाचन हुने तर निर्वाचित प्रतिनिधिले नै संविधान जोगाउन नसक्ने स्थिति देखिएको २०१५, २०४८ का निर्वाचनपछि यस्तै देखापरेको थियो भन्दै उनले अब त्यस्तो स्थिति आउन नहुने बताए ।
सन् १९५० मा भारतले ल्याएको संविधान अहिले पनि कायम रहेको उनले बताए । ६७, ६८ वर्षसम्म पनि त्यही संविधानले काम गरेको उनले सुनाए । चीनमा सन् १९४९ संविधान ल्याएको भन्दै उनले त्यही संविधानले उनीहरुले आज पनि काम गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पाँचवटा संविधान असफल पारिएको र अहिलेको छैटौँ संविधान पनि असफल बनाउने तत्वहरु सक्रिय रहेको आरोप लगाए । भारततर्फ संकेत गर्दै डा. भट्टराईले संविधान जारी गर्न नदिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिवादका रुपमा संविधान जारी गरेको बताए । उनले त्यसबापत नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुपरेको सुनाए ।
उनले दुश्मनी साँधेर संविधान जारी गर्दा अवरोधको प्रयास नभई नेपालीले बनाएको संविधान जारी गर्नलागेकामा अवरोध आएको भन्दै अप्रत्यक्षरुपमा भारतको आलोचना गरे । रातोपुलमा आयोजित चुनावी सभामा वामपन्थीलाई एकपटक अवसर दिन मतदातालाई आग्रह गरे । उनले आफूहरुले जिते पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार दिने दाबी गरे ।
विगत २० वर्षसम्म जनतालाई केही दिन नसकेकोमा गुनासो गर्दै उनले ०५१ सालमा नौ महिने नै भए पनि जनताले केही पाएको बताए । उनको संकेत मनमोहन अधिकारीको वृद्धभत्तातर्फ थियो ।
केपी ओलीको पालामा केही कदम चाल्न खोजे पनि चौतर्फी घेराबन्दी गरेर सत्ताबाट बाहिर पठाइएको उनले गुनासो गरे । त्यतिबेला विकास निर्माण, राष्ट्रियताका अडान, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, केरुंग काठमाडौं, काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी र पूर्व पश्चिम रेलको कुरा आफूहरुले अगाडि बढाउन खोजेको दाबी गरे । एकपटक आफूहरुलाई मतदाताले टेष्ट गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममै संवोधन गर्दै एमालेका निर्मल कुइँकेलले आफ्नो क्षेत्रका जनताका दैनिक झेल्नुपरेका समस्याको समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले गौशालाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन, खानेपानी, ढलनिकास जस्ता कुरालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को गत वैशाखमा भएको निर्वाचनमा लाखौँ रकम अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ । एन्फा निर्वाचन भएको करिब पाँच महिनापछि आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष
जनस्वास्थ्य सङ्घमा निर्वाचन हुने
काठमाडौँ / नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न यही असोज १३ गते निर्वाचन हुने भएको छ । नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी सङ्घ ९प्रजातान्त्रिक० समूह र नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी ९प्रगतिशील० समूह मुख्यरुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका
माल्दिभ्सको आम निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी नेता सोलिहले चुनाव जितेको दाबी
माले। माल्दिभ्समा आइतबार भएको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विजयी हुने सम्भावना देखिएको मिडिया रिपोर्टमा जनाइएको छ। सोलिहले आफुले चुनावमा जित हासिल गरेको दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले
सङ्घीय संसदको दुई संयुक्त समितिका सभापति निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा÷ राष्ट्रियसभा) का संयुक्त दुई समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । ती संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्व समिति छन्